Ukusebenza njengoko a lawyer kwi-Norway - abaqondisi-mthetho Norway. Web - Abaqondisi-mthetho ka-Norway! Isithai abaqondisi-mthetho, a isemthethweni portal.
Abaqondisi-mthetho ka-Norway! Isithai abaqondisi-mthetho, a isemthethweni portal.
Ukusebenza njengoko a lawyer kwi-Norway - abaqondisi-mthetho Norway. Web
Kuyenzeka ukuba umsebenzi kwi-Norway phantsi langaphandle iphepha-mvume ukuba practise njengoko a lawyerApho imithetho nemigaqo-nkqubo isicelo kuxhomekeke nokuba lawyer intends ukuba practise umthetho kwi-Norway kwi osisigxina qho ngonyaka okanye kuphela intends ukuvela njengokuba ebizwa-'bust lawyer', kwaye ngomhla nokuba lawyer yi-national i-EEA state. Ukuba unqwenela ukuba kumiswe amanqaku kwi-Norway ukuze anike isemthethweni iinkonzo apha, kufuneka ukuthumela isaziso - isicelo kuba oku Supervisory Ibhunga kuba Isemthethweni Senzo. Kwi-elinjalo, uza practise phantsi iphepha-mvume lemoto yakho ukusuka emakhaya lizwe sebenzisa ikhaya lakho lizwe ke elinolwazi isihloko, kunye yakho nationality esimdibanisa nomnye u-njalo. Abaqondisi-mthetho ukusuka EEA states unako practise langaphandle umthetho wamazwe ngamazwe kwaye isithai umthetho. Kufuneka ukuthumela isaziso ukuba Supervisory Ibhunga ukuba ufuna ukuqala phezulu isemthethweni senzo. Kufuneka uxwebhu ukuba ubhalisiwe njengoko a lawyer (okanye no elinolwazi isihloko) kwikhaya lakho lizwe. Ezinye iimfuno jikelele kufuneka kanjalo kubekho kuhlangatyezwana nazo, ezifana furnishing zokhuseleko, ukubhatala imirhumo i-Supervisory Ibhunga kuba Isemthethweni Senzo kwaye Zoluleko Ikomiti, kwaye presenting isibhengezo ka-ukwamkelwa ukunikezelwa ukusuka i-zincwadi. Abaqondisi-mthetho evela kumazwe ngaphandle EEA indawo unakho kuphela practise langaphandle umthetho wamazwe ngamazwe - hayi isithai umthetho. I-Supervisory Ibhunga linakho kanjalo stipulate iimeko kwaye izithintelo kwi-mvume. Ezinye iimfuno jikelele kufuneka kanjalo kubekho kuhlangatyezwana nazo, ezifana furnishing zokhuseleko, ukubhatala imirhumo i-Supervisory Ibhunga kuba Isemthethweni Senzo kwaye Zoluleko Ikomiti, kwaye presenting isibhengezo ka-ukwamkelwa ukunikezelwa ukusuka i-zincwadi. Langaphandle abaqondisi-mthetho (ukusuka amazwe ngaphakathi okanye ngaphandle EEA area) abo musa ube ujonge ukuba practise kwi osisigxina qho kwi-Norway anelungelo ukubonelela isemthethweni uncedo kwi-Norway ngaphandle ekubeni ukuze ufake isicelo. Iinkonzo unako kubonelelwa ngokunxulumene isinorwegian, kumazwe angaphandle kwaye wamazwe ngamazwe. Kwi-elinjalo, abaqondisi-mthetho ingaba obliged ukusebenzisa zabo elinolwazi isihloko zabo ukusuka ekhaya lizwe kwaye urhulumente igama elinolwazi umzimba zabo ekhaya lizwe apho baya belong, ukuba oko kuyasebenza apha. I-isithai amagunya okanye iinkundla ingayalela uxwebhu ukuba umntu kwi-umbuzo ngumbolekisi ogunyazisiweyo ukuba practise njengoko a lawyer. Kwiindawo ezinjalo iimeko, ekhaya lizwe ke imithetho kuba practising njengoko a lawyer kanjalo isicelo lawyer ke isemthethweni practise kwi-Denmark. I-isithai Wokuziphatha kuba abaqondisi-mthetho kanjalo kubo Yimeko yokuba zilawulwe ukuba lawyer sele furnished ukhuseleko wakhe okanye yakhe ekhaya lizwe kuba na eyimali lowo okanye yena babe incur kwi-Denmark. A isithai iphepha-mvume ukuba practise njengoko a lawyer unako kukhutshwa ngokusekelwe i-no-mvume - mvume ukusuka ekhaya lizwe.
Ngo kokufumana i-isithai iphepha-mvume, umntu kwi-umbuzo linelungelo ukusebenzisa isihloko 'losapho' kwi-mat kunye abaqondisi-mthetho educated kwi-Denmark.
Langaphandle abaqondisi-mthetho unakho ngokunjalo sebenzisa zabo elinolwazi isihloko zabo ukusuka ekhaya lizwe. A isithai iphepha-mvume ukuba practise njengoko a lawyer ngu esikhutshwe Supervisory Ibhunga kuba Isemthethweni Amanqaku kwi-kweemeko ezithile: abaqondisi-mthetho abakhoyo abavela kumazwe angaphandle i-EEA urhulumente unako kukhutshwa a isithai iphepha-mvume ukuba practise njengoko a lawyer ukuba babe anelungelo practise njengoko a lawyer zabo ekhaya lizwe. Ukongeza, okokuba bamele i-njalo ngexesha Ngezifundo ka-Oslo demonstrating ukuze bafumane ukutya ulwazi isithai umthetho.
Baya kufuneka kuqala isicelo Supervisory Ibhunga kuba Isemthethweni Senzo ukwenza njalo.
Kuba abaqondisi-mthetho evela kumazwe ngaphandle EEA indawo, kuyenzeka ukuba isicelo Supervisory Ibhunga kuba Isemthethweni Senzo kuba iphepha-mvume ukuba practise njengoko a lawyer. Ukulandela inkqubo yayo yonke, uvavanyo-sicelo ke competence kwaye suitability, Supervisory Ibhunga isengakhupha umyalelo iphepha-mvume ukuba practise njengoko a lawyer. Ukuziqhelanisa kule meko kakhulu restrictive.
Zasekuhlaleni Litigation abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-Norway kuba Wonke Isixeko - isithai umthetho
Rusland en Noorwegen lossen Arctische grens geschil - nieuws van de Wereld - dagblad van Het noorden
© 2021 Abaqondisi-mthetho ka-Norway! Isithai abaqondisi-mthetho, a isemthethweni portal.